ezaposwa ngomhla 10 / 12 / 2019 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Oku kuyakuba sisishwankathelo ngokubanzi solwazi ngokubanzi kuphela, ayisiyiyo indlela yokukhokela. Oku akuthethi ukuba ndiyakuvumela ukusetyenziswa kwayo kwaye ayikokwamkelwa kokusetyenziswa.
Rhoqo akuqondwa kakuhle okanye miscategoriser- kukho iintlobo ezahlukeneyo zeesoftware. IiCorticosteroids, ezineziphumo ebezingalindelekanga ezimbi kunezi Anabolic Steroids, ngasizathu sithile ayenziwa yidemon ngamajelo eendaba kwaye ukusetyenziswa kwayo kuyakwamkeleka kwiimeko ezininzi- kubandakanya ezemidlalo kunye nezobugcisa. Zihlala zisetyenziselwa ukulwa nokudumba. Kukho iProgesterone esetyenziswa kwiindlela ezininzi zolawulo lokuzalwa kwaye ithathwa zizigidi zabafazi yonke imihla. I-Anabolic steroids (apha ibizwa ngokuba yi-AS okanye AS) zezinto abantu abaninzi abacinga ngazo xa beqala ukuva "ii-steroids" kunye nazo zonke izinto ezimbi ezinxulumene nazo.
A) Amatyhalarha e-Testicular- xa ufaka ixabiso elikhulu le testosterone I-HPTA yomzimba wakho iqala ukuvala (iyeke ukuvelisa iTesttosterone kuba umzimba wakho uphola ngaphezu kokwaneleyo); Ngamafutshane oku kubangela ukuba iibhola zakho zinciphe. Uninzi lwexesha alubonakali. Mhlawumbi i-25% yokunciphisa, i-50% ubuninzi. Nje ukuba uphume kumjikelo, sebenzisa i-PCT yakho (unyango lwasemva komjikelo) babuyela kubungakanani obupheleleyo. Ayisosigxina. Abanye abantu baqhuba i-HCG (i-chorionic-gonadatropin yabantu) ngelixa besemjikelezweni ukugcina iibhola zabo kubungakanani obupheleleyo kwaye ikwanceda ekubuyiseni kuba igcina iiseli zakho ze-leydig zisebenza.
B) Baldness / ukulahleka kweenwele: i-AS ayibangeli gazi okanye ulusu lweenwele. Nangona kunjalo, ingakhawulezisa inkqubo. Ukuba ulahleko lweenwele lubaleka kusapho lwakho, uya kumangaliswa kakhulu uya kuba ngumgqatswa wokukhawulezisa le nkqubo. UBill Roberts wabhala ngeentlobo ezimbini ezahlukeneyo zeSteroids- Uhlobo I kunye nohlobo II; Chwetheza I kuba yindlela ephambili njenge-Testosterone, iTren, iDecca, iSust, njl. Njl I-Winstrol (stanazolol), i-dbol, i-anavar, i-Masteron njl. Uninzi lwabantu lugxeka iziyobisi ezinjengeWinstrol kunye I-Masteron Enanthate (iDrostanolone) Njengonobangela wokulahleka kweenwele kwaye uzame ukunqanda ezo ziyobisi xa uxhalabile nge-MPB, xa ingelilo uhlobo oluchaphazeleka kakhulu nefuthe elibonakalayo kwi-MPB (impandla yamadoda) kunezinye iintlobo zamachiza. Kwaye ngokucacileyo iziyobisi ezisekwe kwi-DHT (njenge-deca) ziya kuba nzima ngakumbi entlokweni yakho. Olona hlobo kuphela lokulwa oku kukuthatha iFinasteride (propecia / proscar) uhlobo oluthile lweshampu yohlobo lweerogaine kunye nezinye izinto ezimbalwa.
C) Amachaphaza- abanye abantu baqhekeka ebusweni; abanye abantu bazikhuphela esifubeni okanye emqolo… kwaye ulusu lwabanye abantu luyacoca. Kwakhona, wonke umntu uchaphazeleka ngokwahlukileyo.
D) Ndiva ngathi oku kufanele ukuba kugutyungelwe phantsi kwe-atrophy yamatyhalarha kwaye ndiluhlobo nje lokulibala. Amaxesha amaninzi ndisiva abantu bethetha ngo-AS besenza ukuba i-dick yakho inciphe, xa bethetha iibhola zakho. Ke, ukucacisa, i-dick yakho ayinciphisi kwaye loo nto yenza malunga nengqondo enkulu njengokuthatha ukutshiza ngeempumlo kunciphisa impumlo yakho. Ukuba kukho nantoni na, xa igazi elininzi ligeleza kuloo ndawo ndingathi uya kuthanda ukwenzeka ngokuchaseneyo. Kwakhona kuxhomekeke kwimixube oyithathayo- ezinye iziyobisi ezinje ngeDec kunye neTren zinokuba ngqwabalala kwi-libido yakho (yiyo loo nto ibinzana, "deca-dick") kwaye abanye abantu bakhethe ukuthatha I-Tadalafil (Cialis) (171596-29-5) okanye i-viagra (awunyanzelekanga) kodwa ezinye iziyobisi ezinje ngoVavanyo ngqo (naluphi na uhlobo) okanye i-dbol iyakunyuka udonga kwaye ihashe nje ngo… .. Amantombazana amaninzi anendoda okanye Isoka kumjikelo kubonakala ngathi liyonwabele into yabo kumjikelo, lol.
E) "Roid-rage" - Akukho nto injalo. Ilula ngoluhlobo. Ukuba ungumntu ongazinzanga, ewe, baya kukwenza ungazinzi ngakumbi. Kodwa emva koko, uninzi lwezinye izinto kunye namayeza ngokuqinisekileyo aya kubangela lonto. Ukuba awuzinzanga ngokwengqondo okanye ufumaniseke ukuba unengxaki yengqondo akufuneki ucinga ukuthatha i-steroids. Ndinqwenela ukuba kuyafana notywala. Uninzi lwabantu aluchaphazeleki koku. Uninzi lwabantu luziva ngathi bakwimeko engcono okanye abangafani kwaphela. Ndiyabona abantu mhlawumbi besiba yi-cockier kuba bancinci kancinci kwaye bomelele kancinci, kodwa ngaphandle kwalonto, nantoni na enika ingxelo "roid-rage" (iziko likarhulumente okanye hayi) lihashe.
I-Steroids ayibangeli ukuba abantu bafe okanye ikhokelele ekufeni kwabo ngenxa yempendulo engalunganga. Akukho zifundo zenzululwazi ezibonisa amakhonkco ngokuthe ngqo kwii-anabolic steroids kunye nokufa. Abantu bayokukhomba ku-Zyzz, kodwa abayi kukhomba kwimbali yosapho / yesifo sentliziyo / yeemeko kwaye andicingi ukuba isidumbu senziwe esidlangalaleni? Ukucaphula amanani e-CDC ukusuka ku-2005 kwi-Bigger Stronger Faster:
kunye nokufa ngenxa ye-anabolic steroids ……: 3
Ewe, ukuba i-steroids yenziwe ngendlela engafanelekanga ingaba yingozi. I-Oral steroids (njenge-dbol, i-winstrol, i-anavar, njl. Njl.) Zine-hepatoxic kwaye zinokuba ngqwabalala kwisibindi sakho ukuba uthathwe ngeedosi eziphezulu kakhulu kunye nexesha elide kakhulu… kwaye ukuba utya utywala xa ujikeleza. Kungenxa yoko le nto kucetyiswa ukuba kwenziwe iipaneli zegazi ngaphambi, ngexesha nasemva komjikelo. Ukuthatha izinto ezinjengobisi lobisi kunokunceda ukunciphisa umthwalo kwisibindi sakho.
Uxinzelelo lwegazi luyakwazi kwaye luya kunyuka, kwakhona ngakumbi kuxhomekeke kumxube owuthathayo (ngakumbi I-Methandrostenolone (Dianabol) ipowder kunye ne-EQ). Ukuthatha igwele elibomvu irayisi kunokunceda ukugcina i-cholesterol kunye ne-BP. Ngokuqinisekileyo yinto efuna ukubekwa esweni. Kwaye ngokuqinisekileyo sisizathu sokuba kutheni kufuneka utye okucocekileyo ngelixa ujikeleza- ungatyi ipitsa, iiburger, kunye nefry.
I-Steroids ithatha i-intramuscularly- not intravenously. Akukho bhendi isongelayo ingalo yakho okanye nantoni na. Ukuba ubunokujova emthanjeni okanye kwimithambo-luvo unokufa. Kukho iindawo ezithile zenaliti- ezona zikhuselekileyo zibhinqileyo, i-quads, i-glutes, kunye ne-ventro-gluteal site. Abantu bahlala becinga ukuba iesile / i-glutes yeyona ndawo ikhuselekileyo, ndingavumi kuba kunzima ukufikelela kwaye kuba i-nerve ye-sciatic ibaleka kakhulu kuloo ndawo kwaye ukuba uyibethile, ngethamsanqa ngobomi bakho bonke.
I-Steroids kwaye ayisiyonto ingummangaliso. Ungahlala esofeni kwaye utye iitapile zetapile kwaye mhlawumbi uya kuba mkhulu, kodwa ukuba yile nto uza kuyenza xa uzithatha, akufuneki nokuba uzihluphe ngokuchitha imali yakho. Kusafuneka wenze umsebenzi. Kusafuneka nditye icocekile- ndingatsho nokuba icocekile. Kusafuneka ugcine iliso kuyo yonke into.
I-Pro-hormones ayisiyondlela ikhuselekileyo ye-steroids kuba ungazithenga kwi-GNC / Gcwalisa isondlo / naphina. Ziyingozi KAKHULU kwaye amaxesha ngamaxesha awukwazi ukuthenga iziyobisi ze-PCT zokwenyani apho emva koko ungene kwindlela eyiyo, yokufumana kwakhona ukuba uyachacha konke konke. Baninzi abantwana abaye baphela kwi-TRT ubomi babo bonke ngenxa yale nto. Andiqondi ukuba akukabikho tyala emva kokumangalelwa kwezi venkile.
Ngaba iMK-677 (Ibutamoren) isebenza kakuhle kulwakhiwo lwezihlunu? Uphengululo Olumnandi [ENTSHA]	Isikhokelo sokuthenga esigqibeleleyo se-SARM SR9009 sokwakha umzimba